यसरी रोचक तरिकाले गर्नुहोस् माइग्रेनको सफल उपचार ! Nepalpatra यसरी रोचक तरिकाले गर्नुहोस् माइग्रेनको सफल उपचार !
यसरी रोचक तरिकाले गर्नुहोस् माइग्रेनको सफल उपचार !
पिनास माइग्रेनको दुखाइ हटाउन नेशनल सर्वे अफ से’क्सु’अल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोध अनुसार हप्तामा एक पटक महिनामा कम्तीमा ५ पटक गरेको सेक्सले माइग्रेनको समस्या हल हुने निष्कर्ष निकालेको छ । हरेकलाई यो नियम भने लागु नहुने देखिएको छ ।
यौन आनन्द एउटा बाध्यता नभई आवश्यकता हो । आजकाल समाजमा यसको कमिले माइग्रेन र डिप्रेसन बढाएको देखिन्छ । विविध रोग निको बनाउन यसले औषधि जस्तै काम गर्ने बताइएको छ । हरेक रोगमा औषधि नै आवश्यक हुन्छ भन्ने होइन यसको पछाडि मान्छेलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
समाजमा यौनका कुरा गर्दा कतिपयले यसलाई गलत भन्ने गरेको हामीले पाउने गरेका छौं । यस्ता कमी-कमजोरीलाई हटाइ केहि मानसिकता बोकेको व्यक्तिहरूलाई यौन स्वास्थ्यका आवश्यक पक्षहरूलाई हामीले बताउनु पर्ने समय आएको देखिन्छ ।
यौनजन्य अपराध घट्नुको अर्को कारण छाडा पन र उमेर नपुगेकाहरूले मोबाइलको साहेताबाट गलत साथीसंग प्रेम जालमा फस्नाले गर्दा यस्तो अवस्था आयको र खुला तरिकाबाट बिक्री बितरण गर्ने अल्कोहलले समाजमा अपराधी बढाएको देखिन्छ ।
आजको यो लेखमा हामीले सेक्स अपरिहार्य भएको र यसको कमीले मानसिक रोग पैदा गराएको हामी पाउछौं। केहि महिलामा गरेको एक अध्ययनमा १०० जना महिला छनोट गरेकोमा ७५% महिला यौन आनन्द उठाउन नसकेको तथ्य फेला परेको छ ।
डिप्रेसन र माइग्रेनको पछाडि यौन असन्तुष्टि पनि एक हुने कुरा यौन रोग विषेशज्ञको मत रहेको देखिन्छ । डिप्रेसन पछाडिको अर्को पाटो भनेको कतै यौन कमजोरी ले त होइन भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ ।
यौन सम्पर्क गर्दा पुरूष ५ देखि ७ मिनेटमा फल हुने तर महिला १० देखि १५ मिनेटमा फल हुदै गर्दा कतिपय महिलालाई सेक्स आनन्द कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको कारण प्राय: घरमा असान्ती डिप्रेसन जस्ता समस्या आज यदा कदा देखिएको छ ।
स्वस्थ्य धन हो हामीले स्वस्थ रहन समाजमा स्वास्थ्य सम्बन्धि सेमिनार गोष्ठी जस्ता प्रोग्राम संचालन गरेर समाजमा यस्ता कुराको जनचेतना फैलाउन आवस्यक रहेको देखिन्छ । सेक्सलाई गलत नभनी यस्को आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अघि बढ्न सके फिजुल खर्च र अनावश्यक औषधि सेवनबाट सिंगो समाजलाई बचाउन सकिनेछ ।